महिला वा पुरुष जो भए पनि कपाल झर्ने समस्या बाट चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब यति कुरा जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
कपालको काम टाउकोलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु मात्रै होइन । अत्यधिक चिसो र अत्यधिक तातो बाट मस्तिष्कलाई जोगाउने काम पनि कपाल कै हो । अझ त्यसमाथी कपालले सुन्दरता थप्ने काम पनि सँगसँगै गरिरहेको हुन्छ । केटामान्छेले कपाल छोटो अवस्था मै काट्ने गरे पनि धेरै जसो केटीहरुले सुन्दर देखिनका लागि कपाल लामो हुने गरेर पाल्ने गर्छन् । सामान्यतया पुरानो कपाल झरिराख्ने र नयाँ पलाइराख्ने प्रक्रिया भइरहेको हुन्छ । तर कहिलेकाहीं असामान्य तरिकाले कपाल कमजोर हुने र झर्ने गर्न थाल्दछ । यसका अनेक कारण हुन सक्छन् ।
अचेल मानसिक तनाव, चिन्ता, पाचन प्रणालीको समस्या, अपर्याप्त पोषण, औषधिको साइड इफेक्ट, प्रदूषित वातावरण, खाद्यपदार्थमा विषादी रसायन आदिको अधिकतम प्रयोग र प्रकृतिबाट टाढिने प्रक्रियाले गर्दा शरीरका विभिन्न अंगसँगै कपाललाई पनि प्रभावित गर्न थालेको छ । अचेल तीस बर्ष नकटी युवायुवती कपाल झर्ने समस्याले पीडित हुन थालेका छन् । यसैले होला, कपाल झर्न रोक्ने दाबी गर्ने सौन्दर्य उत्पादनको बिक्री समेत हाम्रो मुलुकमा दिनहुँ बढ्दो छ ।
यदि परिवारमा कसैको कपाल झरेको थियो, आफ्नो बाबु वा आमाको पुस्तामा कसैमा यो समस्या थियो भने सोको कारण पनि तपाइको कपाल झर्न सक्दछ । वंशाणुगत गुण हो कपाल झर्ने भने यसको समाधान थप जटिल बन्ने गर्छ ।
डाइटमा सही मात्रामा पोषण नहुँदा शरिरमा आइरन, भिटामिन ए, प्रोटिन, जिङ्क, क्याल्सियम जस्ता पौष्टिक तत्वको कमी हुन थाल्छ । जसको कारण कपाल झर्ने समस्या निम्तिन्छ ।
चुरोटमा हुने निकोटिनको कारण रगतका नशा साँघुरिन थाल्दछन् । जसको कारण शरीरमा अक्सिजन लेभल कम हुन्छ । यसले शरिरको अंगहरुको साथ कपाललाई पनि असर पुर्याउँछ ।
बढी रक्सी पिउँदा शरिरमा टक्सिक पदार्थ बढ्न थाल्छ । आइरन, जिङ्क, पानीमा कमी हुन्छ । फलत: कपाल झर्छ ।
कपाल झर्नुमा अर्को प्रमुख कारण हो चिन्ता । चिन्ताले शरिरको हर्मोनको सन्तुलन बिग्रन्छ । साथै शरिरको शक्ति अनावश्यक रुपमा नष्ट हुन्छ ।
तपाईले कपाल झर्नुका कारणहरु त थाहा पाउँनु भयो । यदि यसमध्ये केहि कारणहरु तपाईको आदतका रुपमा बसेका छन् भने तिनलाई हटाउँनु या कम गर्नु राम्रो हुन्छ । यसका अतिरिक्त केहि उपचारहरु पनि कपाल झर्न रोक्नका लागि लाभदायक हुन्छन् । यहाँ केही सामान्य घरेलु टिप्सहरु दिएका छन् । यिनको प्रयोग निरन्तर धैर्य राखेर गर्नुभयो भने पक्कै पनि कपाल झर्ने समस्याबाट छुटकार पाउन सकिन्छ । प्रयोग गरेर हेर्नुस् ।
– नुहाएपछि टाउकोमा घ्युकुमारी दल्ने र १५ मिनटपछि धुने । यसो गर्नाले पनि कपाल झर्ने क्रम रोकिन्छ । सातामा तीनपटक यस्तो गरेमा चाँडै सुधार देख्न पाइन्छ ।
– पानीमा नीमको पात हालेर पानी आधा नसुकुञ्जेल उमाल्ने र यसरी उमालेको पानी सेलाएपछि कपाल धुनाले कपाल बलियो हुन्छ । नीमपानीले नुहाउँदा पानी आँखामा नपरोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।
– सुकेको अमला तोरी अथवा नरिवलको तेलमा केही बेर भिजाइ मसाज गर्दा कपाल बलियो हुन्छ ।
– राती मेथी भिजाउने, बिहान यसलाई राम्रोसँग पिस्ने र कपालको जरासम्म लाग्नेगरी टाउकोमा दल्ने । ४० मिनेटपछि कपाल धुने । यसो गर्दा कपाल झर्ने क्रम रोकिन्छ ।
– प्याज पिसेर यसको रस निकाल्ने, त्यसमा रुवा चोपेर कपालको टुप्पोदेखि फेदसम्म लाग्नेगरी दल्ने र ४० मिनेटपछि धुनाले कपाल झर्न रोकिन्छ ।
– ग्रीन टीको दुईवटा ब्याग तीन कप तातो पानीमा डुबाउने र यसलाई नसेलाइञ्जेलसम्म त्यसै छोडिदिने । त्यसपछि सेलाएको पानीले कपाल धुने अथवा मसाज गर्ने । यसो गर्दा कपाल बलियो हुन्छ ।
– अण्डाको पहेँलो भाग हटाइ सेतो भाग कपालको जरासम्म पुग्नेगरी टाउकोमा दल्ने र २० मिनेटपछि नुहाउने । अण्डामा रहेको प्रोटिन, भिटामिनले कपाल झर्ने क्रम रोक्छ ।
– कपाल बढी नै झर्ने गरेको छ भने सातामा पाँच दिन करिब ३० मिनेटका हिसाबले व्यायाम गर्नुपर्छ । व्यायाम गर्दा टाउकाको रक्तसञ्चार तीव्र भई अक्सिजन पुग्छ र कपाल कमजोर हुन पाउँदैन ।
– कपाल झर्ने समस्या भएकाले प्रोटिन, आइरन, जिंक, सल्फर, भिटामिन–सी, भिटामिन–बी युक्त खानामा जोड दिनुपर्छ । यसले कपाललाई बलियो बनाउँछ ।
– समयसमयमा कपालमा मेहदी लगाउनाले पनि कपाल बलियो हुन्छ ।
– कपाल बलियो बनाउन र झर्न नदिन सातामा दुईपटक कपालमा अमला, बदाम, जैतुन, नरिवल, तोरीको तेल लगाउनुपर्छ ।
# के नगर्ने
– कपाल झर्ने समस्या भएकाले कपाल कसेर बाँध्नु हुँदैन ।
– कपाल भर्ने समस्या छ भने कपाल कोरिरहनु हुँदैन । यसो गर्दा कपाल झर्ने क्रम बढ्न जान्छ ।
– कपाल झर्ने समस्या छ भने घाममा धेरै हिँड्डुल गर्नु हुँदैन । घाममा निस्किँदा छाता बोक्नुपर्छ ।
– कपाल बढी नै झर्ने गरेको छ भने बढी तातो पानीले नुहाउनु हुँदैन ।
– कपाल नझरोस् भन्ने चाहनेले कपाल रंगाउने, स्ट्रेट गर्नु हुँदैन । कपाललाई प्राकृतिक अवस्थामै रहन दिनुपर्छ ।
– कपाल भर्ने समस्या भएकाले नुहाएपछि कपाल जोडसँग पुछ्नु हुँदैन ।
– कपाल झर्ने समस्या छ भने रातो मासु कम खानुपर्छ ।
– फर्सीको बियाँ (सुकाएको), बन्दा, ब्रोकाउली, काउली, दाल आदि बढी खानुपर्छ ।
– जंक फुडमा क्यालोरीको मात्रामात्रै उच्च हुने र अन्य पोषक तत्व नहुने भएकाले यसले कपाल थप झार्न सक्छ ।
यस्ता छन्, कपाल झर्ने समस्याबाट बच्ने उपायहरु –
यहाँ हामीले आयुर्वेद, अन्य प्राचिन तरिका र घरेलु उपायहरुका बारेमा केहि जानकारी राखेकाछौँ जसले कपाल झर्ने समस्याबाट बचाउँछ । यी मध्ये कुनै विशेष उपाय विशेष व्यक्तिहरुका लागि लाभदायक हुन्छन् र अरु नहुन सक्छन् । भन्नुको अर्थ, व्यक्ति अनुसार पनि यस्ता उपाय फरक फरक हुन सक्छन् । यसैले कुनै उपाय केहि दिन अपनाएर काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्नु लाभदायक हुन्छ ।
१.प्याज र फिटकिरी
प्याजमा एन्टीअक्सिडेन्ट नामक तत्व हुन्छ । यसले कपाल झर्नबाट रोक्न मद्दत गर्छ । तीन वटा प्याज र फिटकिरीको सानो टुक्रा लिनुहोस् । प्याजको रस निकालेर फिटकिरी पिसेर मसिनो धूलो बनाउनुहोस् र त्यसलाई मिलाएर रातभर कपालमा लगाई छाडिदिनुहोस् त्यसपछि बिहान कपाल राम्रोसंग धुनुहोस् । यो कार्य हप्तामा दुईपटक गर्नु आवश्यक हुन्छ । जसले तपाइँको कपाल झर्नबाट रोक्छ ।
२.केरा र अण्डा
एक एक वाटा केरा र अण्डा लिनुहोस् र केरा अण्डा मिलाएर पेस्ट बनाउनुहोस् र कपालमा लगाएर आधाघण्टा छाडिदिनुहोस् । त्यसपछि मनतातो पानीले कपाल धुनुहोस् । यसो गर्नाले केही दिनपछि कपाल झर्न बिस्तारै रोकिन्छ ।
३.अण्डा र ग्रीन टी
अण्डा खानाले शरीरलाई जति नै फाइदा गर्छ त्यतिनै कापालका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ । अण्डामा प्रशस्त मात्रामा प्रोटीन हुन्छ । त्यसैले एक वटा अण्डाको सेतो भाग र दईचम्चा ग्रीन टीको पेस्ट बनाएर कपालको जरासम्म लगाउनुहोस् र आधाघन्टा पछि सफा पानीले धुनुहोस् । यो हप्तामा तीन पटक सम्म गर्नुभयो भने तपाइँको कपाल झर्ने समस्या समाधान हुन्छ । यसका साथै दैनिक रुपमा नियमित पौष्टिक आहारको सेवन गर्नु, नियमित ब्यायाम गर्नु तथा प्रशस्त मात्रामा निदाउनु पनि जरुरी हुन्छ ।
विश्वास गर्नुस्, नगर्नुस् कपाल झर्नुको एक मुख्य कारण भनेको तनाव हो । जब मान्छे तनावमा हुन्छ तब उसको कपाल झर्ने समस्या बढ्छ । नियमित योगाले तनावलाई कम गर्ने तथा सरीरमा हर्मोनको मात्रा सन्तुलित गर्ने भएकाले कपाल र्झन कम हुन्छ ।
५. तातो तेलले मालिस गर्ने
तोरी, सरस्यूँ अथवा नरिवलको तेललाई हल्का तताउनुहोस् । ठिक्क तातेको तेलले कपालको जरा जरा सम्म पुग्ने गरी मज्जाले मसाज गर्नुहोस् । झण्डै एक घण्टा त्यत्तिकै राख्नुहोस् अनि त्यसपछि स्याम्पुले कपाल धुनुहोस् । राति सुत्ने बेलामा कपालमा तेल घसेर भोलि पल्ट बिहान कपाल पखाल्दा पनि हुन्छ ।
६. कागतीको रसमा अमलाचूर्ण
कागतीको रसमा अमलाचूर्ण र पानी मिसाएर लेदो बनाएर टाउकोमा लगाएर एक–डेढ घण्टापछि धुँदा कपाल झर्न रोकिनुका साथै चायासमेत कम हुन्छ । सातामा दुई पटक यस्तो गर्नु पर्दछ | कपाललाई स्वस्थ र निरोगी राख्न झर्ने समस्या नभएकाहरूले समेत यो प्रक्रिया अपनाउँदा यसले भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित कपाल झर्ने प्रक्रियाबाट बचाउ हुन्छ ।
७. अश्वगन्धा, ब्राह्मी तेल, सिकाकाई, भृंगराज आदिको उपयोगले कपाल झर्न रोक्ने मात्र नभई यसले कपाल उमार्ने काम गर्दछ |
८.अझ भृंगराजले त फुलेको कपाललाई कालोसमेत बनाउन छ । भृंगराजको १५/२० वटा पातको पेस्ट बनाएर २० मिनेटसम्म टाउकोमा लगाएर राख्ने र यसपछि स्याम्पु लगाएर धुँदा धेरै फाइदा पुग्छ ।
९.जटामसीसमेत कपालका लागि अत्यन्त लाभकारी मानिन्छ । यसले छालाहरूको खराबी हटाउनुका साथै रगतलाई शुद्घीकरणसमेत गर्छ । जटामसीले तालुमा रक्तसञ्चार राम्रो गराउँदा त्यहाँ पोषकतत्त्व आदि पुग्छ र कपाल झर्नबाट रोकिने मात्र नभई झरेको कपालसमेत पलाउँछ । जटामसीको ५/६ थोपा तेललाई हामीले लगाउने नरिवल वा अन्य तेलमा मिसाएर टाउकोमा १५ मिनेटसम्म मालिस गरेर आधा घण्टापछि टाउको धुँदा फाइदा पुग्छ ।
१०.हाम्रो भान्सामा उपयोग हुने मेथी कपाल झर्नबाट रोक्ने राम्रो उपाय हो । यसका लागि दुई चम्चाजति मेथी भुटेर पिँधी थोरै पानी राखेर पेस्ट बनाएर २० मिनेट कपालमा राखेर त्यसपछि धुनुपर्छ । यसले कपाल झर्नबाट रोकिनुका साथै चायालाई पनि हटाउँछ र छालाको स्वास्थ्य राम्रो पार्छ ।
११.नरिवल, महाभृंगराज, अमला, सिसिम विज, बदाम, ब्राह्मी तेलमध्ये कुनै एकले ४५ मिनेटसम्म टाउकोमा मालिस गर्दासमेत कपाल झर्न रोक्न सहयोग गर्दछ | तेल मालिसले टाउकोको रक्तसञ्चार बढाउनुका साथै जरा उत्पन्न हुने वा कपाल झरेको ठाउँमा फेरि कपाल पलाउ सहयोग गर्दछ |
१२.यस्तै पिप्पली, मरिच, दूध, कागतीको बीउको पेस्ट बनाएर रौँ झरेको ठाउँठाउँमा बेलुका लगाएर बिहान धुँदासमेत धेरै फाइदा पुग्छ ।
१३.आधा कप घ्यूकुमारीमा तीन चिया चम्चा नरिवलको तेल मिसाएर २० मिनेटसम्म तालु र कपालमा लगाएर मनतातो पानीले पखाल्दासमेत फाइदा पुग्छ । यस्तै भृंगराज, अमला, सिकाकाई, ब्राह्मी सबैको मात्रा मिलाएर पेस्ट बनाई सकेसम्म दिनहुँ, नभए साताको तीन पटक तालुमा लगाउँदासमेत कपाल झर्न रोकिन्छ ।
Topics #कपाल #कपाल झर्न समस्या #कपाल झर्ने कारण #कपाल बलियो
Don't Miss it खान जाने स्याउ फल मात्र होइन, अमृत हो
Up Next सुरुमै थाहा पाए, उपचार हुन्छ ब्रेन ट्युमरको । यस्ता हुन्छन् लक्षणहरु, जानी राखौँ
3 months ago sam dahal
अनेकौ औषधिय गुड भएको बेसार, येस्ता छन् फाइदाहरु
१. धेरै पिसाब लागेमा धेरै पटक पिसाब गरिरहनु पर्ने, पानीको प्यास बढी लाग्ने भएमा वा मधुमेह (डायबिटिज) भएमा पनि बिहान\_बेलुका…